Madaxweyne Xasan sheikh iyo Cathrene Ashton oo qurba-joogta ku amaanay dib-u-dhiska Soomaaliya – Radio Daljir
Seteembar 14, 2013 3:17 b 0
Nairobi, September 14, 2013 – Maalinta Isniinta ee 16 september waxaa la wada-sugayaa in uu furmo shirka Hiigisiga mustaqbalka Soomaaliya ee New Deal, kaas oo lagu cusamay inta badan dowladdaha caalamaka iyo madaxda Soomaalida oo la tegi doona shirka qorshe.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud iyo madaxa siyaasada arrimaha debeda ?midowga Yurub Cathrene Ashton, ?ayaa war-saxaafadeed ay soo wada-saareen waxay ku sheegeen arrimo badan oo khuseeya shirka furmaya iyo xaalada Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan sheikh Maxamuud wuxuu ku amaanay beesha caalamka in ay mar kasta garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya iyo qorshaheeda dhinaca horumarinta iyo soo celinta amaanka, wuxuu xusay howgalka AMISOM ee dalka jooga.
Mrs. Ashton iyo madaxweyne Xasan sheikh waxay si wadajir ah u sheegeen in dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ay ka go?antahay tiigsiga mustaqbal wanaagsan oo ay hesho Soomaaliya, kaasoo ku dhisan nabad iyo horumar.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxa siyaasada debeda midowga yurub qoraalka ay soo saareen, sidoo kale waxaa lagu xusay in ay hoos u dheceen weeraradii iyo falalkii ay geysan jireen kooxaha Burcad-badeeda, qoraalka waxaa lagu amaanay qurba-joogta oo ka qeyb qaatay dib-u-dhiska dalka.
Madaxda Soomaalida ayaa haatan ku soo qul-qulaysa Brussels iyagoo ka qeyb-galaya shirka Hiigsiga Soomaaliya ee New deal, waxaa la filayaa shirkaas in ay ka soo baxayso natiijo wax ku ool u ah bulshada Soomaalida oo idil, taas oo isugu jirta dhaqaale iyo horumarin.